Liverpool oo si layaab leh ugu dhaqaaqeysa saxiixa Xherdan Shaqiri – Gool FM
Koox weyn oo England ah oo ku biirtay liiska kooxaha ku dagaalamaya saxiixa Haaland
Liverpool oo si layaab leh ugu dhaqaaqeysa saxiixa Xherdan Shaqiri
Dajiye June 6, 2018
(Liverpool) 06 Juunyo 2018. Sida ay baahiyeen saxaafada dalka England Liverpool ayaa cagta saartay wadada ay ku dooneyso in ay kula soo saxiixato xidiga kooxda Stoke City Xherdan Shaqiri.
kooxda Stoke City ayaa hoos kaga dhacday xili ciyaareedkii dhawaan lasoo gaba gabeeyay horyaalka Premier League.
Xidigan kooxda Stoke City Xherdan Shaqiri ayaa ka sameeyay qaab ciyaareed cajiib ah horyaalka Premier League, wuxuuna kaalin mug leh ka qaatay dhanka weerarka kooxda Stoke City.
Laakiin sida warbixinta lagu sheegay Jürgen Klopp ayaa xiiseenaya inuu lasoo saxiixdo weeraryahano si wanaagsan kaga ciyaari kara dhanka weerarka, wuxuuna liiska ciyaartoyda uu doonayo uu qeyb kaga dhigay 26 jirka kooxda Stoke City, hadii uu ku guuldareesto saxiixa Nabil Fekir.
Xherdan Shaqiri ayaa xaqiijiyay inuu ka tagayo Stoke City ka dib markii.ay u dhacday heerka labaad, wuxuuna heystaa qiima fudud ee lagu kansali karo heshiiskiisa kaasoo gaarsiisan 12 ilaa iyo 13 milyan ginni.
Agaasimihii hore ciyaaraha Real Madrid: “Is casilaada Zidane waa qasaarihii ugu weynaa ay kooxda la kulantay”
Marcelino Garcia oo ka hadlay suurtagalnimada uu ku noqon karo badalka Zidane ee kooxda Real Madrid